Wasiirka Dalxiiska Jamaica: Jawaabta Dalxiiska Caalamiga ah ee Firfircoon ayaa Hadda Loo Baahan Yahay
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiirka Dalxiiska Jamaica: Jawaabta Dalxiiska Caalamiga ah ee Firfircoon ayaa Hadda Loo Baahan Yahay
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Jamaica News Breaking • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Wararka Burburinta Portugal • Waajib ah • Wakhtiga waarta • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, oo ka tirsan jaamacadda Evora ee madasha Portugal
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, ayaa sheegay in masiibada COVID-19 ay hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay siyaasad-dejiyeyaasha dalxiiska caalamiga ah iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha si ay u dhaqaajiyaan hab aad u firfircoon oo go'aan leh, si kor loogu qaado adkeysiga qaybta.
“Dunida Socdaalka - Madasha Évora,” oo ah dhacdo warshadeed socdaal waara oo caalami ah, ayaa maanta ka bilaabatay Évora, Portugal.
Dood-wadaag ayaa diiradda lagu saaray dulucda “COVID-19: Qeyb Adag oo Wadata Heshiis Cusub oo leh Baahiyaha Hoggaaminta Cusub.”
Wasiir Bartlett wuxuu iftiimiyay in masiibada ay hoosta ka xariiqday muhiimadda ay leedahay in la sameeyo guddi hawleed ama guddi wax -qabad oo si dhaqso leh loo hawlgeliyo bilowga xiisadda.
“Guud ahaan, masiibada ayaa xusuusisay dejiyayaasha siyaasadaha dalxiiska iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha in ay si isku mid ah u yihiin maareeyayaasha dhibaatooyinka. Tani waxay u baahan tahay qaab -dhismeed fahamsan oo aqbalaya ku -dhowaanshaha hanjabaado kala duwan oo ku wajahan qaybta iyo natiijada ka dhalatay baahida loo qabo in la dhaqaajiyo hab firfircoon si kor loogu qaado diyaar -garowgeeda si loo waajaho caqabadaha hadda iyo mustaqbalka, ”ayuu yiri Bartlett.
Wuxuu soo jeediyay in hoggaankan muhiimka ah lagu xoojiyo iskaashi iyo iskaashi macno leh; siyaasadaha xogta lagu wado; fikirka hal-abuurka leh iyo la-qabsiga iyo dhisidda awoodda aadanaha. Tixgelinnada kale waxaa ka mid noqon kara habab dagaal leh oo loogu talagalay kala -soocidda badeecada; samaynta nidaamyo xog-ku-ool ah oo dhab ah; iyo ballanqaad ku aaddan horumarinta dalxiiska waarta oo dheelitiraysa dano badan iyo tixgelinno mustaqbalka haddii dhaqaale, bulsho, dad, dhaqan iyo dhab ahaan, deegaan.
Wasiirka ayaa hadalkan jeediyay mar uu ka hadlayay dood cilmiyeedka oo si weyn loo sugayay "Dunida Socdaalka - Madasha Évora," dhacdo warshadeed waarta oo waarta oo caalami ah, oo maanta ka bilaabatay Évora, Portugal.
Dood-wadareedka ayaa diiradda lagu saaray dulucda “COVID-19: Qeyb Adkeysi leh ayaa u waddo Heshiis Cusub oo leh Baahiyaha Hoggaaminta Cusub,” waxaana daadihiyay Peter Greenberg, Tafatiraha Safarka ee CBS News. Kulanku wuxuu sahamiyey sida dawladaha iyo warshaduhu ay kor ugu qaadaan hoggaanka si isku mid ah oo u oggolaanaysa waaxda inay saamayn ku yeelato siyaasadda.
Wasiirka waxaa ku weheliyay Mudane Jean-Baptiste Lemoyne, Xoghayaha Dalxiiska ee Faransiiska; Mudane Fernando Valdès Verelst, Xoghayaha Arrimaha Dalxiiska ee Spain; iyo Mudane Ghada Shalaby, Wasiir ku -xigeenka Dalxiiska iyo Qadiimiga, Jamhuuriyadda Carabta ee Masar.
Intii lagu guda jiray soo bandhigidiisa Wasiirka Bartlett ayaa sidoo kale iftiimiyay in masiibada ay hoosta ka xariiqday muhiimadda ay u leedahay waaxda dalxiiska si loo dhiso guddi hawleed ama guddi wax -qabad oo isla markiiba la kicin karo bilowga xiisadda.
“Hantidan muhiimka ah waxay siisaa faa iidooyin muhiim ah khibradaha maareynta dhibaatooyinka marka la eego hubinta jawaabaha deg-degga ah, isgaarsiinta la beegsanayo, dheelitirka macluumaadka u dhexeeya digniinta iyo hubinta iyo iskaashiga guud ee iskaashiga iyo iskaashiga, kaas oo u oggolaanaya ka-faa'iideysiga awoodaha kala duwan, xirfadaha iyo ilaha gaaraan hadafyada guud. Iyada oo ay sabab u tahay cilaaqaadka xoogeystay ee ka dhexeeya daneeyayaasha, awoodda lagu ogaanayo khataraha goor hore iyo hirgelinta xeeladaha yareynta wax -ku -oolka iyo soo -kabashada ayaa sidoo kale laga yaabaa in la wanaajiyo, ”ayuu yiri Bartlett.
Qabanqaabiyayaashu waxay xuseen in daabacaaddii ugu horreysay ee “A World for Travel - Forum Évora” ay diiradda saari doonto qaybaha muhiimka ah ee warshadaha oo isbeddelku khasab ku yahay, aqoonsiga tallaabooyinka loo baahan yahay in la qaado iyo xoojinta xallinta si loo hirgeliyo.
Shirku wuxuu ku wajahan yahay mawduucyada udub -dhexaadka u ah joogtaynta sida kala duwanaanshaha moodalka dhaqaalaha, saamaynta cimilada, saamaynta deegaanka ee dalxiiska, isbeddelka xeebaha iyo badda iyo sidoo kale siyaasadaha dhexdhexaadka ah ee beeraha iyo kaarboonka.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica Bartlett
Mudane. Faallooyinka Edmund Bartlett oo dhammaystiran:
"Saameynta weyn ee dhaqaalaha weyn ee warshadaha dalxiiska ee Kariibiyaanka ayaa qiil ka dhigaysa in loo aqoonsado mid ka mid ah warshadaha gobolka oo hadda loo tixgeliyo" mid aad u weyn in la fashilmo. " WTTC waxay ku qiyaastay in “dhaqaalaha dalxiiska” uu qiyaastii 2.5 jeer ka weyn yahay waaxda dalxiiska ee Kariibiyaanka. Guud ahaan, tabarucaadka aan tooska ahayn iyo kuwa aan tooska ahayn ee dalxiiska ee wax -soo -saarka dhaqaale ee Kariibiyaanka ayaa lagu qiyaasaa inay saddex laab ka yihiin celceliska adduunka oo aad uga sarreeyaan kuwa gobollada kale. Xogtaani waxay aqoonsan tahay in dalxiisku uu soo saaro saamayn badan marka loo eego isku xirnaanta badan ee gadaal ka leh oo ay ka mid yihiin beeraha, cuntada, cabitaanka, dhismaha, gaadiidka, warshadaha hal abuurka, iyo adeegyada kale. Dalxiisku wuxuu ku biiriyaa 14.1% wadarta GDP (oo u dhiganta US $ 58.4 bn) iyo 15.4% wadarta shaqada. Dalka Jamaica wadarta guud ee qaybta pre-COVID 19 waxaa lagu cabiray JMD 653 bilyan ama 28.2% wadarta GDP iyo 365,000 shaqooyin ama 29% wadarta shaqada.
“Dhaqaalaha aan ku tiirsanayn, ee ku tiirsan dalxiiska ee Kariibiyaanka, ka soo kabashada deg-degga ah ee xiisadda dalxiiska ee hadda ay sababtay masiibadu runtii waxay ku qotontaa xasilloonida dhaqaalaha guud ee gobolka. Markaa, muddadan hoos -u -dhaca iyo hubanti -la’aanta daba dheeraatay, waxaa jiray baahi cad oo ah in si weyn loo wadaago khataraha iyo mas'uuliyadaha la xiriira maareynta masiibada iyo sidoo kale hawsha aqoonsiga iyo dabagalka yareynta, adkeysiga iyo xeeladaha soo kabashada, dhammaan daneeyayaasha oo ay ku jiraan siyaasad -dejiyeyaasha, hoggaamiyeyaasha warshadaha, hoteelada, danaha safarka, bulshooyinka, ganacsiyada yaryar, shaqaalaha dalxiiska, mas'uuliyiinta caafimaadka, fulinta sharciga iwm. xilligan mugdiga ah, hoggaaminta iyo raasamaalka bulshadu aad bay u kala sarreeyeen.
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, (midig) ayaa si taxaddar leh u dhegeysta qodobbadii ay soo bandhigtay Mudane Ghada Shalaby, Wasiir -ku -xigeenka Dalxiiska iyo Qadiimiga, Jamhuuriyadda Carabta ee Masar (shaashadda) intii lagu guda jiray dood -wadareedka 'A World for Travel - Forum Évora,' dhacdo warshadeed socdaal waara oo caalami ah, oo maanta ka bilaabatay Évora, Portugal. Wadaagga hadda waa (bidix) Mudane Fernando Valdès Verest, Xoghayaha Dalxiiska, Spain iyo Mudane Jean-Baptiste Lemoyne, Xoghayaha Dalxiiska, Faransiiska.
“Marka la eego xaaladda Jamaica, oo ay ugu wacan tahay isku -darka ficil deg -deg ah, hoggaan firfircoon, is -gaarsiin wax -ku -ool ah iyo feker hal -abuur leh, waxaan awoodnay inaan si dhakhso leh ula qabsanno oo u hirgelinno hab -raacyo caafimaad iyo badbaado cusub oo hagayay maareynta waaxda ee masiibada si waafaqsan adduunka oo dhan heerarka. Waxaan sidoo kale si firfircoon uga qaybqaadanaynaa dhammaan daneeyayaashayada- wakaaladaha socdaalka, khadadka dalxiiska, hoteelada, wakaaladaha ballansashada, wakaaladaha suuqgeynta, diyaaradaha iwm WTO, CTO CHTA iwm. wuxuu qaadayay dhammaan tillaabooyinka lagama maarmaanka u ah inuu ahaado meel aamin ah oo aamin ah dhammaan booqdayaasha.
“Waxaan sidoo kale qaadannay hab bulsho oo dhan oo ku aaddan hirgelinta iyo la socodka hab -maamuusyada lagama maarmaanka u ah maareynta wax -ku -oolka ah ee masiibada. Tusaale ahaan, qorshahayaga shanta qodob ah ee dib u soo kabashada waaxda dalxiiska oo ay ka mid yihiin horumarinta borotokoollada caafimaadka iyo badbaadada ee xoogga leh, kordhinta tababarka dhammaan qaybaha waaxda dalxiiska, dhisidda kaabayaasha amniga iyo amniga, iyo helidda qalabka PPE iyo nadaafadda ayaa la qorsheeyay lana hirgaliyay oo ku salaysan wada-shaqaynta qaybaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay oo ka kooban daneeyayaal muhiim ah oo ka socda waaxda dalxiiska, Wasaaradda Dalxiiska, iyo Wakaaladaha Wasaaradda.
“Guud ahaan, masiibada ayaa xusuusisay dejiyayaasha siyaasadaha dalxiiska iyo hoggaamiyeyaasha warshadaha in ay si isku mid ah u yihiin maareeyayaasha dhibaatooyinka. Tani waxay u baahan tahay qaab -dhismeed fahamsan oo aqbalaya u -dhowaanshaha hanjabaado kala duwan oo ku wajahan qaybta iyo natiijada ka dhalatay baahida loo qabo in la dhaqaajiyo hab firfircoon si kor loogu qaado diyaar -garowgeeda si loo waajaho caqabadaha hadda iyo mustaqbalka. Sidaa darteed, fikradda guud ee maareynta dhibaatooyinka waxay leedahay oo sii wadi doontaa inay u baahan tahay hoggaan firfircoon, go'aan leh oo hoosta ka xariiqay iskaashiyo iyo is-dhexgal macno leh, siyaasado xog-ku-saleysan, fikirka hal-abuurka iyo la-qabsiga, dhisidda kartida aadanaha, hab dagaal badan. ”